Yini ama-pancreas abhekene nomzimba womuntu? > Izinkinga zesifo sikashukela
Imisebenzi yama-pancreas emzimbeni womuntu
Amanyikwe atholakala ngezansi nje nangemuva kwesisu, endaweni lapho ihlangana khona namathumbu. Imisebenzi yama-pancreas ukuthi ikhiqiza ama-enzymes wokugaya asiza ukugaya ukudla esikudlayo, futhi ilawula ushukela wegazi ngokufihla kwe-insulin ne-glucagon. I-iron isitho esibalulekile, kepha kungenzeka ukuthi uphile ngaphandle kwawo. Kuphela uma kwenzeka kususwa i-gland lapho kuyodingeka njalo ukuthola ama-hormone nama-enzymes wokugaya ngendlela yezidakamizwa.
Isakhiwo nendawo yomzimba
I-pancreas iyisitho esidala esimile esakhiwe ngemuva, esiswini, futhi sisendaweni ephakeme ngaphansi kwayo, yingakho igama laso. I-gland inobude obungaphezu kwamasentimitha ayi-15 futhi inesisindo esingu-80-90 g. Inekhanda, umzimba nomsila. Uhlangothini lwesokunene se-gland, olubizwa ngokuthi ikhanda, lunamathiselwe ku-duodenum, uhlangothi olungakwesobunxele selulelwe ngakwesobunxele futhi lubizwa ngokuthi umzimba. Amanyikwe aphela ngomsila wawo eduze kwefindo.
Ama-95% amaseli we-gland akhiqiza ijusi le-pancreatic, equkethe ama-enzyme adiliza ukudla. Lokhu kufaka phakathi:
I-trypsin ne-chymotrypsin kudingekile ukugaya amaprotheni,
i-amylase iphula ama-carbohydrate,
lipase liphenduka amanoni libe ngamafutha acid.
Ama-Enzymes afakwa emiseleni kulo lonke indlala, kusukela emsileni kuye ekhanda kuya ku-duodenum.
Ama-5% asele amaseli we-pancreatic yi-endocrine, ebizwa ngokuthi ama-islets of Langerhans. Zikhiqiza izinhlobo eziningana zama-hormone akhishwa ngqo egazini, futhi zilawula nokusebenza kwe-pancreatic kanye noshukela wegazi.
Ngakho-ke, imisebenzi yamanyikwe emzimbeni womuntu imi ngalendlela elandelayo:
imfihlo yama enzymes wokugaya wokugaya ukudla engena emzimbeni,
ukugcina izinga likashukela elinempilo, kubalulekile ekusebenzeni kwazo zonke izitho ezibalulekile, kubandakanya ubuchopho, isibindi kanye nezinso.
Isebenza kanjani ingxenye yengxenye
Ukuzwisisa ukuthi ama-pancreas abhekene kanjani emzimbeni womuntu, ake sikhumbule ukuthi yini inqubo yokwenza ukugaya. Umsebenzi wokugaya ukudla ususa ukudla ezakhiweni ezincane kakhulu ezingangenwa egazini. Inqubo iqala ngisho nasemlonyeni lapho sihlafuna ukudla futhi sikuthambise ngokukhululekile ngamathe aqukethe i-amylase. Emlonyeni, ukwehlukana kwamakhamzimba kuqalisa. Ngaphezu kwalokho, esiswini, ngaphansi kwethonya lejusi lesisu, kudayiswa amaprotheni. Inhlama yokudla yakhiwa esiswini futhi ibizwa ngokuthi i-chyme yehlela ngaphakathi kwe-duodenum, lapho ekugcineni igaywa ngesenzo sejusi ye-pancreatic ne-bile evezwa lapha ngemigqa ye-bile. Ukwephulwa kwamafutha kwenzeka lapha kuphela, ngaphansi kwesenzo se-bile ne-lipase, okuvunywa ngamanyikwe.
I-pancreas enempilo ifihla ilitha lama-enzyme ngosuku.
I-secketion yejusi ye-gland iqukethe ama-enzymes angasebenzi asetshenziswa ku-duodenum kuphela. Ukunciphisa ijusi le-gastric ku-chyme, kukhiqiza i-bicarbonate. Lokhu secretion we-pancreatic kulawula i-acid ye-chyme, kuvikela udonga lwamathumbu emiphumeleni eyingozi ye-acid acid yesisu futhi kwakha indawo evamile yokusebenza kwama-enzyme wokugaya ukudla. Zigcwalisa ukubola kokudla kuzakhi zomzimba, okuyi-95% ecijwe emgodini wegazi esiswini esincane.
Ukuvikeleka kwangaphakathi kwe-pancreatic
Kungani ama-pancreas edingeka njengengxenye yesistimu ye-endocrine yomuntu? Khumbula ukuthi ingxenye ebalulekile yokusebenza kwamanyikwe emzimbeni womuntu ukuthi ikhiqiza izinhlobo eziningana zamahomoni. Lokhu kwenzeka kumaseli akhethekile - iziqithi zeLangerhans, eziqanjwe ngo-Paul Langerhans, isazi saseJalimane, esazithola okokuqala ngekhulu le-19. Lezi ziqhingi zezindlala zakhiwa izinhlobo ezahlukahlukene zamaseli akhiqiza ama-hormone alandelayo:
Iseli - i-glucagon,
Amaseli e-B - i-insulin,
Amaseli we-D - somatostatin,
Amaseli we-F yi-pancreatic polypeptide.
Kuyathakazelisa ukuthi izinhlobo ezahlukene zamaseli e-gland azisatshalaliswa ngokungahleliwe. Amangqamuzana akhiqiza i-insulin atholakala enkabeni yesiqhingi futhi azungezwe “igobolondo” lezinhlobo ezisele zamaseli.
I-pancreatic insulin yenza imisebenzi ebaluleke kakhulu emzimbeni wethu:
idlulisa ushukela usuka egazini uye emisipha nezicubu ukuze isetshenziswe futhi ngendlela yamandla,
isiza i-glucose yokugcina ushukela ngendlela ye-glycogen uma kungenzeka ukuthi idingeka ngobukhulu obukhulu - ukucindezelwa, ukuqeqeshwa neminye imithwalo.
I-insulin neglucagon ihlala isebenza kuma-tandem ukuze kulondolozwe ukulingana kwe-glucose egazini. Ngokwanda kwezinga layo, amangqamuzana e-pancreatic B akhipha i-insulin, futhi lapho izinga lawo lincipha, i-A cell secrete glucagon. Le hormone ibangela ukuthi isibindi siguqule izitolo ze-glycogen zibe ushukela, bese singena egazini.
Ama-hormone asele we-pancreatic adlala indima yokulawula nokugcina ukusebenza kwamaseli ekhulula i-insulin neglucagon.
Izici ezithinta kabi umsebenzi wesitho
Amanyikwe yisitho esisungulwe kahle esithinta isimo somzimba wethu wonke. Ukungasebenzi okuncane kakhulu emsebenzini wakhe kungavusa inkimbinkimbi futhi kube nzima ukwelapha izifo. Kunezici zobungozi ezingaphansi kokulawulwa kwethu, nalezo esingakwazi ukuzithonya. Izici zobungozi konke kukhulisa amathuba okuthola isifo se-gland.
Izici zengozi ezingalawulwa yithonya lethu:
Iminyaka. Ingozi yesifo se-pancreatic inyuka ngokuhamba kweminyaka, ikakhulukazi ngemuva kweminyaka engama-45.
UPaul Abesilisa bagula kaningi kunabesifazane. Lokhu ikakhulukazi kubangelwa ukubhema, yize muva nje lo mkhuba usudalikile, abesifazane beqala ukubhema kakhulu.
Ubuhlanga. Abantu baseMelika baseMelika bagula kaningi kunebala elimhlophe. Umuthi awukwazi ukukuchaza lokhu okwamanje.
Isizungu. Okunye ukuguqulwa kwezakhi zofuzo kungadluliselwa kusuka kubazali kuya ezinganeni futhi kuvuse ama-pancreatic pathologies. Ukuba khona noma ukungabikho kwezinhlobo ezinjalo kungakhonjiswa ngokuhlolwa okhethekile kofuzo.
Izici ezingezinhle ezingasuswa zodwa:
ukubhema - kuyiphinda kabili ingozi yomdlavuza we-pancreatic,
utshwala - ngokweqile, imfihlo yezindlala iyanda, iqala ukuwa isuka ngaphakathi, inqubo yokuzicwila kwesitho iqala,
ukukhuluphala ngokweqile kanye nokukhuluphala - ngama-20% akhulisa amathuba we-pathologies ye-gland, amafutha asesiswini akhiwe endaweni okhalweni ayingozi kakhulu,
ukuxhumana isikhathi eside namakhemikhali ayingozi emsebenzini - ukuhlanza okomile, ukusebenza kwensimbi, njll.
Ukuba khona kwalezi zinto ezisengozini akusho ukuthi uzogula. Umuthi uyazi amacala lapho umuntu ethola isifo se-pancreatic ngisho nalapho kungekho khona kwezimo ezinjalo. Kepha ukwazi ngalezi zinto kuzokusiza ukuthi waziswe kabanzi ngalolu daba futhi, uma kunesidingo, uthathe isinqumo esifanele lapho ukhetha ukunakekelwa kwezokwelapha.
Kwenzekani nge-pancreatic dysfunction nokuthi iphathwa kanjani
Umsebenzi oyinhloko we-gland ukuqedela ukucubungula ukudla okutholakele emzimbeni. Ukwenza lokhu, kukhiqiza ama-enzyme. Kepha ngaphansi kwethonya lezinto ezingezinhle, ukungasebenzi kahle kwalo kwenzeka, indlala ayihambisani nomsebenzi wayo. Bese kuba ne-pathologies ehlukahlukene yama-pancreas.
Ukukhululeka kobuhlungu obukhulu, ukulaliswa esibhedlela nokuhlinzwa okuphuthumayo kungadingeka, ngokwesibonelo, uma kubangelwe yitshe elivimba umsele. Ukwelashwa okujwayelekile ukususa izinto ezinobungozi (utshwala, ukubhema, njll.), Ukuzila ukudla, ukuphuza uketshezi oluningi, ukulandela indlela odla ngayo, nokuthatha umuthi wobuhlungu uma kunesidingo.
Izifo ezihambisana nokukhubazeka kwama-enzyme
Kunzima ukweqa ukubaluleka kwama-pancreas, omsebenzi wakhe uhlinzeka ngawo wonke umzimba amandla nezakhi zomzimba. Imvamisa, ama-enzyme wokugaya avezwa ngawo ayasebenza kuphela lapho engena amathumbu amancane. Uma kwenzeka ukwehluleka futhi kusebenze ku-gland uqobo, kuyalimala bese kuqala ukuzibhubhisa. Lapho umsebenzi wobunqolobi wendlala ukhubazekile, kuvela izifo ezibucayi ezahlukahlukene.
Njengomthetho, uqala kungazelelwe, kuthatha izinsuku ezimbalwa kuya kwesonto. Imbangela evame kakhulu yalesi sifo ukuvaleka komgodi we-gland, noma i-Water ampule. I-anatomically, ama-ducts we-bile kanye ne-pancreatic duct axhunyiwe endaweni eyodwa, ebizwa ngokuthi i-ampulla yeVater, lapho kusuka khona ujusi we-bile ne-pancreatic kungena amathumbu amancane. Uma ama-gallstones, ehamba emaceleni, avale le mpatha, khona-ke ama-enzyme awakwazi ukushiya i-gland, aqongele kuwo futhi awubambe.
I-pancreatitis eyingozi nayo ingabangelwa ukusetshenziswa kabi kotshwala, ukubhema, izidakamizwa, ukwelashwa kwe-steroid, amazinga aphezulu kawoyela kanye nesici sefa. Izimpawu zayo:
Ubuhlungu be-bhande lobuhlungu ku-hypochondrium,
Ubuhlungu obuthambile buqala esiswini esingaphezulu bese buqina, bunwebele emuva. Ngenxa yobuhlungu obuhlala buhlala futhi bungabekezeleleki, umuntu uzizwa egula kakhulu futhi udinga usizo lwezokwelashwa ngokushesha. Emahoreni okuqala angama-24, isiguli sithola isiphuzo esiningi, sivunyelwe ukudla kuphela ngemuva kwamahora angama-48. Ukumisa ubuhlungu obukhulu, kunqunywa imishanguzo yezinhlungu ze-narcotic. Uma ama-gallstones eba yimbangela yalesi sifo, lapho-ke asetshenziswa ukuze asikhiphe. Iningi leziguli ezine-pancreatitis eyingozi liyalulama kungakapheli izinsuku ezingama-5-7.
Ukuhlaselwa okuphindaphindwe futhi okungaphathwa kahle kwe-pancreatitis eyingozi kuhumusha lesi sifo kusigaba esingelapheki. Kulesi simo, ama-pancreas ayaqhubeka abhujiswe, izibazi, amatshe ahlanganisiwe kanye nama-cysts akhiwa kuwo, ovimba umgudu wakhe wokugcwala. Ukuntuleka kwama-enzyme kwenza kube nzima ukutholwa kokudla, kubangele ukuntuleka kwezinto ezidingekayo zomzimba, futhi kucasule isifo sikashukela.
Ekuqaleni, lesi sifo sidideka kalula nge-pancreatitis eyingozi ngenxa yezimpawu ezifanayo. Kepha njengoba kuqhubeka, abaguli baphelelwa isifiso sokudla nesisindo, i-halitosis, isifo sohudo kanye nezitofu ezinamafutha kuvela emlonyeni. Ezimweni eziyingozi ikakhulukazi, ukopha kwangaphakathi nokuvinjwa kwamathumbu kungenzeka.
Kunezimbangela eziningi ze-pancreatitis engapheli, kepha ama-70% amacala ahambisana nokuphuza ngokweqile. Phakathi kwezinye izizathu, kukhona:
kunciphisa isiteshi noma ukuvimbela kwayo ngamatshe enyongo / pancreas,
i-cystic fibrosis, ebangela ukwakheka kwe-mucus emaphashini, iphazamisa nama-enzymes wokugaya, iba mnene futhi ivecous, ivimbe iziteshi nemithambo yegazi emzimbeni wesibeletho,
amazinga aphezulu e-calcium ne-triglycerides egazini,
Esigabeni esingamahlalakhona, ushintsho lwe-pathological ku-gland luyaphenduka. Ukwelashwa kugxile ekuthatheni imithi yezinhlungu, ama-enzyme okufakelwa athuthukisa ukumuncwa kwama-carbohydrate, amafutha kanye namaprotheni. Ukungenelela kokuhlinzwa kuyadingeka lapho kudingeka ukuvula noma ukunwebisa i-pancreatic duct, susa ama-cysts namatshe.
I-Endocrine cell pathology
Lapho secretion ye-endocrine ye-pancreas iphazamiseka emzimbeni, lokhu kubangela ukungalingani ekukhiqizeni nasezimisweni zamahomoni akhiqizayo. Kuzo zonke izifo ze-pancreatic, isifo sikashukela yisona sifo esivame kakhulu.
Isifo sikashukela ukugula okubangelwa yi-metabolic. I-metabolabolism ikhombisa ukuthi umzimba wethu ukubamba kanjani ukudla okugaywayo.Ukudla okuningi okuningana kwehlukaniswa kube ushukela, umthombo omkhulu wamandla amangqamuzana omzimba wethu. Kepha ushukela awukwazi ukungena kumaseli uqobo, ngoba lokhu kudinga i-insulin. Okuqukethwe kwe-glucose okwandayo ezigulini ezinesifo sikashukela kunezizathu eziningana:
i-insulin ayikhiqizwa nhlobo,
ukuvikelwa kwe-insulin enganele,
ukuba khona kwamaseli amelana ne-insulin (insensitive).
Iziguli eziningi zingasilawula isimo sazo ngokulandela ukudla okunempilo, ukuzivocavoca, nokubheka ushukela wegazi wazo njalo. Kepha uhlobo lwesibili sikashukela yisifo esiqhubekayo, futhi ngokuhamba kwesikhathi, umuntu kuzodingeka athathe i-insulin.
Uhlobo 1 sikashukela yisifo se-autoimmune lapho amasosha omzimba ehlasela futhi abhubhise khona amaseli e-B wezindlala akhiqiza i-insulin. Imbangela ngqo yalesi sifo ayaziwa, odokotela bayihlobanisa nezinto zofuzo nezemvelo. Ukuxilongwa kwenziwa ngokushesha ngemuva kokuzalwa, noma kuze kube iminyaka engama-20. Cishe i-10% yazo zonke izinhlobo zesifo sikashukela zohlobo 1. Kubizwa nangokuthi kuncike kwe-insulin, okungukuthi, lezi ziguli zizothatha i-insulin impilo yazo yonke, zivame ukuthatha ukuhlolwa kwegazi futhi zinamathele ekudleni okunconyelwayo.
Isifo sikashukela sohlobo 2 sitholakala sintula i-insulin noma lapho amaseli engaphenduli kuwo, okungukuthi, ayamelana ne-insulin. Cishe ama-90% ezimo zesifo sikashukela emhlabeni wonke zohlobo 2. Kubonakala ngezimpawu ezinjengokuchama kaningi, ukunciphisa umzimba, ukoma ngokweqile kanye nokuntuleka kwamandla.
Abantu abahlushwa ukukhuluphala kanye nokukhuluphala, ikakhulukazi esiswini. Amafutha amaningi enza umzimba ukhiqize izinto eziphazamisa ukusebenza kwesistimu yezinhliziyo futhi yehlise izinga lokudla komuntu.
Iminyaka. Ingozi yokuba nesifo sikashukela yanda njengoba ukhula. Isizathu asikaziwa ochwepheshe, kodwa bathi njengoba sikhula sithola isisindo esengeziwe, siphulukana nokuzivocavoca umzimba.
Indaba yomndeni. Ingozi yalesi sifo inyuka kulabo ababenesihlobo esiseduze sikashukela.
Amadoda ane-testosterone ephansi. Ososayensi bahlobanisa le nkomba nokumelana ne-insulin.
Akudingeki ube nomcabango ocebile wokuqonda ukuthi i-iron ekhiqiza izinto zamakhemikhali ezihambisana kakhulu nokugaya ukudla izwela kakhulu ukuhlukunyezwa ngokweqile. Ukweqile, ukukhuluphala ngokweqile, ukusetshenziswa kwamafutha amaningi, ushukela notshwala kufaka isandla ekuvinjelweni kancane kancane nasekuhlaselweni kwemisebenzi yako. Ukucindezeleka isikhathi eside okutholwe yinoma yisiphi isitho, kufaka phakathi i-pancreas, kuholela kulesi sifo.
Indima yamanyikwe ekugayweni
Athini ama-pancreas emzimbeni womuntu? Kungaba okunengqondo ngokwengeziwe ukuqala ngomsebenzi olula futhi osobala kakhulu - lowo wokugaya ukudla; ​​kunokuba kube nzima ukuphendula kafushane. Uyini umsebenzi wamanyikwe ohlelweni lokugaya?
Ikhiqiza ama-enzyme abandakanyeka ekuqhekekeni kwezingxenye eziyinhloko zokudla - ama-carbohydrate, amafutha kanye namaprotheni. Umsebenzi we-pocreatic we-exocrine ubonakala ekukhiqizeni ijusi le-pancreatic, elisuswa nge-duct ekhethekile kwi-duodenum. Lapha, ujusi wayo, ohlanganiswe ne-bile yesibindi, wephula ukudla kube yisimo esivumela izingcezwana ukuba zidlule emathunjini.
Ama-pancreas futhi abhekele ukwenziwa kwama-enzyme alandelayo:
lipase - igaya izingqungquthela ezinkulu zamafutha,
i-lactase, i-amylase, i-invertase kanye ne-maltase ichitha i-carbohydrate,
I-trypsin iyi-enzyme ebhula amaprotheni kuphela.
Onke la ma-enzyme aqala ukukhiqizwa yi-gland ngokushesha nje lapho ukudla kungena esiswini. Le nqubo ihlala amahora angama-7-12.
Ukukhiqizwa kwama-enzyme kuncike ekwakhiweni kokudla. Uma amaprotheni egcwala esigaxeni sokudla, indlala iqala ukuwanika ngamandla i-trypsin. Inani elikhulu lamafutha libamba iqhaza ekukhiqizeni i-lipase.Ngokufanayo, ukwenziwa kwama-enzyme abulala ama-carbohydrate kuyakhuthazeka.
Umnyombo womsebenzi we-exocrine walokhu kugcwala ukuthi ukucasulwa kwejusi le-pancreatic nama-enzyme kuhambisana ngokuphelele nenani nekhwalithi yokudla okudliwayo. Kungenxa yalo msebenzi ukuthi akuhlinzekwa kuphela ukugaya ukudla kuphela, kepha futhi nokuvikelwa kwendlala uqobo kuyakhiwa. Ngokubiwa ngokulinganayo kwazo zonke izinto zokugaya ezenziwe nge-gland, lesi sitho sivikelekile ngokuthembekile ekuzenzakaliseni. Lapho ujusi we-pancreatic uthululwa ngenani elihambisana nenani lokudla elichithwayo, lusetshenziswa ngokuphelele ku-duodenum, ngaphandle kokuthola umphumela odabukisayo emsebeni.
I-Iron ifeza indima yayo ye-intrasecretory ngokukhiqizwa kwama-hormone amaningi angafihlwanga ohlelweni lokugaya, kepha aye egazini, athinta isimo sesitho somzimba wonke.
Ngabe ama-pancreas akhiqiza ini ngokwenza umsebenzi we-endocrine? Ama-Hormone akhiqizwa ezakhiweni ezikhethekile zezitho, ezibizwa ngokuthi izichibi zeLangerhans. Akhiwa ngamangqamuzana akhethekile ekukhiqizweni kwama-hormone athile. Lezi zinhlobo ezinhlanu zamaseli:
amaseli we-alpha akhiqiza i-glucagon,
amaseli we-beta akhiqiza i-insulin,
amaseli we-delta akhethekile nge-somatostatin,
Amaseli e-D1 anikezela ngomzimba ngama-polypeptides asematheni,
Amaseli e-PP akhiqiza i-pancreatic polypeptide.
I-hormone eyaziwa kakhulu yi-insulin. Ilawula inani leshukela egazini.
Ngokubhujiswa kwamaseli we-beta, kusilela kwe-insulin, okuwukuqala kokukhula kwesifo sikashukela i-mellitus.
Umsebenzi we-endocrine noma we-endocrine ubonakala ngokulawulwa komzimba okuhlazisayo. Le ndlela yokuqala yokusebenzisa. Ama-pancreas alawula inani le-insulin ne-somatostatin engena egazini, ngenxa yalokho kwakheka ibhalansi yama-hormone kanye nesimo esijwayelekile somzimba siyaqinisekiswa.
Ubudlelwano bemisebenzi ngesakhiwo nendawo yendlala
Ama-pancreas yinto eyindida, ehlanganisa imisebenzi eminingi engenalo uxhumano olunengqondo olusobala nomunye. Le ndida ingumphumela wokuvela kwemisebenzi nezitho zomzimba.
Kwamanye ama-vertebrates, imisebenzi yokugaya kanye ne-endocrine ihlukaniswe futhi igxiliwe ezithweni ezahlukahlukene. Ebantwini nakuma-vertebrates amaningi, izakhiwo ezahlukahlukene zazigxilwe emzimbeni owodwa.
Naphezu kweqiniso lokuthi iqhaza lama-pancreas emzimbeni womuntu lihlukile, umsebenzi oyisisekelo namanje wokugaya ukudla.
Kuhlelo ngalunye lokusekelwa kwempilo, zonke izitho zitholakala ukuze zisheshe futhi zenze imisebenzi yazo ngempumelelo. Ikakhulu umgomo wokubekwa okunengqondo kwezitho zomzimba ulungele uhlelo lokugaya ukudla. Imisebenzi yokugaya ama-pancreas kungenzeka kuphela ngokufakwa okusheshayo kwejusi le-pancreatic kwi-duodenum. Kufanele futhi iza ngokushesha futhi i-bile ivela esibindini.
Amanyikwe atholakala esithubeni esakhiwe yisisu kanye ne-duodenum. Ngakwesokudla sesisu isibindi. Akhiwe ebangeni elithile ukusuka komunye nomunye ngokuqondile, lezi zitho ezimbili zihlangana nemicu lapho i-bile ne-pancreatic juice ingena duodenum.
Isakhiwo nemisebenzi yamanyikwe kuhlangene nesidingo sokuqinisekisa ukusebenza kokugaya ukudla. Ngalesi sizathu, ingxenye enkulu kunazo zonke ye-gland - ikhanda kufanele lisondelene ne-duodenum.
Indawo yazo zonke ezinye izakhiwo ze-gland ezingasebenzi ukugaya iboshelwe ekhanda layo.
I-iron iyinyunyana esebenza ngomzimba emzimbeni owodwa wezakhiwo ezahlukene nemisebenzi. Uma uphendula umbuzo, kungani udinga ama-pancreas, uthola impendulo ende kakhulu, engancishiselwa kwisisho esisodwa - ngokulawulwa okufihlakele komsebenzi womzimba wonke.
Zonke izifo zalesi sitho zihambisana nokuphulwa komsebenzi othile. Izifo ezivame kakhulu yi-pancreatitis kanye nesifo sikashukela. Esimweni sokuqala, inqubo yokuvuvukala iqala e-gland, ethinta ukusebenza kwayo kokugaya ukudla. Okwesibili, ukukhiqizwa kwe-insulin kuyaphazamiseka, okuholela ekuhlulekeni kwe-metabolic emzimbeni wonke.
Imvelaphi yawo womabili ama-pathologies ayikakacaciswa ngokuphelele, kepha abantu abasebenzisa kabi utshwala ne-nicotine bavame ukuba nesifo sokuwa pancreatitis okukhulu. Izinqubo zokuvuvukala zingakhula zingafani nesizinda sokucindezela okukhulu nokudakwa. Zombili lezi zinto zivusa ukusebenza kwe-gland, ngenxa yalokho, izicubu zayo zibhujiswa ujusi we-pancreatic owedlulele. Gqugquzela le nqubo kanye nesifo sesibindi.
Okuxakayo ukuthi kubantu abanesifo sikashukela, i-iron kuzo zonke izindlela ingaba nempilo. Yikho nje ukuthi ngasizathu simbe amaseli wayo we-beta eyeka ukusebenza ngokugcwele. Ukungabikho kobudlelwano be-Causal phakathi kwe-pancreatitis kanye nesifo sikashukela kufakazela futhi ukuzimela kokuziphendukela kwemvelo kokuthuthukiswa kwezakhiwo ezahlukahlukene zesitho esisodwa.
I-pancreatitis yisifo esibi futhi esiyingozi. Kodwa-ke, ingalashwa kusetshenziswa izindlela ezahlukahlukene, kufaka phakathi ukuhlinza nezokwelapha. Indlela ezimele yokulwa ne-pancreatitis iwukudla okufanele uzitholele kukho konke impilo yakho. Inhloso yokwelapha yokudla ukwenza inqubo yokugaya, kanye nokuvikela ukugqugquzeleka kwe-gland hyperfunction.
Isifo sikashukela, abantu kuzodingeka baphile unomphela. Njengoba ama-pancreas engasakwazi ukulawula umsebenzi womzimba ngokuhlanganisa inani elifanele le-insulin, umuntu uthatha lo msebenzi.
Ukukhathazeka okuyinhloko kwesifo sikashukela ukuqapha okungapheli kwenani le-insulin neglucose egazini.
Izifo eziseduze zifaka i-cystic fibrosis, cysts, nomdlavuza we-pancreatic. I-cystic fibrosis yisifo esivela kuhlelo njengelifa. Kubonakaliswa ukwephulwa kwemisebenzi yezitho eziningi zomzimba. Kulokhu, faka amafomu e-fibrosis kuma-pancreas.
Ama-pancreas abaluleke kakhulu ekusebenzeni okujwayelekile komzimba wonke. Ukuvela kwanoma iyiphi i-pathologies kulesi sakhi kuhlale kungathí sina, kudinga ukwelashwa okuqhubekayo noma ukungenelela kokuhlinzwa. Imisebenzi emzimbeni owenziwa yilolu hlelo ingenye ebaluleke kakhulu.